Fitsarana mpitan-tsoratra Job Description / Asa sy ny fandraisana andraikitra Sample - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Fitsarana mpitan-tsoratra Job Description / Asa sy ny fandraisana andraikitra Sample
Fitsarana mpitan-tsoratra Job Description / Asa sy ny fandraisana andraikitra Sample
Jacob Jona 28, 2016 Uncategorized 1 Comment 1,152 Views
Mpitondra fivavahana manatanteraka andraikitra eo amin'ny fitsarana ny lalàna; ho mety-maimaim-poana ho an'ny antsipirihany mpitsara docket ny tranga mba ho antsoina hoe; ary ny vavolombelona, mpisolovava fitsarana.
Manomàna dockets ny ohatra hatao hoe, mampihatra Desktops na milina fanoratana.
Document tranga fironana, mpitsara fividianana, na natao ho an'ny fanomanana ny fitsarana saran'ny fandaniana.
Vahaolana olana avy amin'ny vahoaka mikasika ny fanendrena fitsapana, fitsarana fitsarana, dingana, adjournments alàlana, fiantsoana, subpoenas fandaniana, na ny saran'ny ny sazy.
Hanao sy manan-danja baiko ny fitsarana, toy ny mihantona didy, fanombohana tahirin-kevitra, didim-pitsarana zava-misy.
Manomàna taratasy firaketana ny fitsarana fitsarana’ vokatra.
Manoro hevitra zava-nitranga ny fakana am-bavany momba ny fotoana fitsarana.
Maneho karazana fomba na ho an'ny rehetra na ny asa amin'ny tranga.
Search fifandraisana vavolombelona, mpisolovava, na litigants mba manana zava-misy ho an'ny mpitsara sy antontan-taratasy.
Halalino namoaka taratasy ara-dalàna hitsara fitsaboana na tari-dalana amin'ny fitsarana momba ny firaiketana.
Manaova asa panjakana, anisan'izany ny niresaka antso, mitanjozotra fitsarana antontan-taratasy, , na miandry birao fitaovana na fitaovana.
Araho fizotry ho voaro maneho na courtrooms, ao anatin'izany ny vola, fanafody, na fitaovana.
Rehefa ilaina izany fiovana indictments sy hampiroborobo indictments vaovao mampiasa izay azo ampiharina.
Vakio ny zava-misy sy fiampangana mifandray manoloana ny fitsarana sy ny, raha ilaina, tantara voampanga’ fiangaviana.
Voady in mpitsara ny olona vavolombelona.
Hahazo fitsarana fiampangana na ny sazy sy ny firaketana an-tsoratra be nangonina.
Kilonga fanampiana mpiasa mba hamitany tsara ny antontan-taratasy voadio tamin'ny olona’ fanao.
Hanao sy marika azo ampiharina fitsarana na ny porofo maneho.
Record mpitsara fitsarana, nampiasa taratasy fotoana ny fitsarana fitsarana, na ny famokarana fitaovana, fampiasana fohy-tanana na stenotype entana.
Manomàna courtrooms amin'ny pensilihazo, tatitra, rano, easels ary ho azo antoka fa fitaovana fandraketana miasa.
Manaova horonan-taratasy sy ny antso jurors vatom-pifidianana.
hanomboka faritra, milaza mpitsara, ary niantso azy ireo toorder.
Miresaha amin'ny manam-pahefana Parole, mpisolovava, mpitsara, manam-pahefana, na ara-tsosialy birao manam-pahefana ho synchronize ny fitsarana ny endri-javatra.
Ho mpiasa fandaharam-potoana.
Asa Activities Fepetra
Ny fahalalana ny mamaky Fahalalana-tsipika, ary afa-po amin'ny asa soratra antontan-taratasy izay mifandraika.
Fahaiza-mihaino-Inona hafa hoe manome saina tanteraka,, mahazo fotoana mahatakatra ny zavatra natao, mangataka olana toy ny tonga lafatra, ary tsy diso mesmerizing amin'ny toe-javatra.
Namokatra-an-tsoratra ho mety izay ilain'ny vahoaka miresaka mahomby,.
Miteny ny miresaka amin'ny hafa ny vaovao lazaina amin'ny fomba mahomby.
Maths-Mampiasa maths manamboatra olana.
Technology-teknolojika fampiasana ireo fitsipika sy teknika mba hamahana olana.
Critical-misaina-Mampiasa niady hevitra sy ny antony mba hamantarana ny fahalemena sy ny tombontsoa amin'ny fanafody hafa, vokatra na ny fomba olana.
Active-Learning-ny fahafantarana ny dikan'ny vaovao tsipiriany momba ny tsirairay sy ny hery anaty vao haingana hamaha olana-fanapahan-kevitra sy ny.
Ny fianarana fomba-ny fifidianana sy ny fampiharana educationPERinstructional teknika sy ny fitsaboana mety amin'ny toe-javatra manokana, na fampianarana, rehefa mahafehy lafin-javatra vaovao.
Fanaraha-maso-OverseeingANDAssessing fahombiazan'ny tenanao, ry namana izay hafa, na raharaham-barotra, na mihevitra remedial dingana mba hamorona fiovana.
Social fidirana-raha tsy mahalala ny hafa’ valin-kafatra sy ny fahazoana ny antony mitondra tena raha manao.
Fandrindrana-Manitsy fihetsika eo amin'ny lafiny dingana othersI.
Salesmanship-tena hafa mba hanatsarana ny fitondran-tena na ny sainy.
Discussion-Fandraisana ny hafa miaraka sy miezaka ny hampihavana fahasamihafana.
Fampianarana-Subscribe to ny hafa ny fomba-hanao zavatra.
Service Orientation-Mafy mitady fomba hanohanana ry namana.
Advanced Problemsolving-Ilana famantaranandro be pitsiny sy nandinika olana vaovao izay mifandraika ampiharina safidy sy hamokatra sy hanaiky voafantina.
Fomba Evaluation-Fandalinana vahaolana fepetra arahana ary maniry ny ho lasa famolavolana.
Teknolojia Design-Engineering hanampy mpampiasa sy ny fampifanarahana vokatra na mamorona faniriana.
Tools Selection-famaritana ny karazana fitaovana sy ny fitaovana ilaina mba hamono ny asa.
Andian-Manampy entana, entana, tariby, na ny fangatahana mba hanatanteraka endri-javatra.
Programming mpamokatra solosaina fonosana maro momba ny tanjona.
Asa isan-karazany ny fijerena Tracking-tondro, kiboriny, na fitsirihana mba ho azo antoka ny milina miasa araka ny tokony ho.
Dingana sy ny tahony-Fisakanana ilay asa ny fitaovana na fandaharana.
Maintenance-miasa eo amin'ny mahazatra ny fanaovana fitaovana sy mamaritra rehefa ary inona no karazana fiarovana ho ilaina.
Fanamboarana-Inona no Atao hoe anton-javatra ao ambadiky ny olana nihazakazaka ary mifidy izay lalana handeha momba izany.
Manamboatra-Famerenana fomba na fitaovana mampiasa ny fitaovana izay tena ilaina.
Quality-Control Research-manome fanombanana sy ny fisafoana ny entana, tolotra, na ny fomba fiasa mba hijerena kalitao na fampisehoana.
Fitsarana sy ny fanapahan-kevitra-jerena tombontsoa sy ny vola lany ny ankapobeny ny fitondran-tena izay azo atao ny mifidy ny tsara indrindra iray.
Analysis-fanapahany hevitra ny karazana dingana tokony miasa sy marina ny fomba fanatsarana ny aretina, fomba, ary ny rivotra iainana ho fiantraikany vokatry.
Fomba Analysis-Ilana famantaranandro fomba na ny rafitra famantarana ny fampisehoana, ary koa ny mikasika ny tanjona ny milina ankavanana, na ny fitondran-tena nanana ilaina ny mampitombo fahombiazana.
Time-Management-iray manazava ny vanim-potoana manokana, ary koa ny fotoana hafa.
Fanaraha-maso ny vola-mamaritra ny fomba dolara no mety ho vola hatao ny asa vita, sy ny varotra ho an'ny fandaniana ireo.
Asa ny Product Lafin-Fahazoana sy mijery ny marina manoloana ny fampiasana ny fitaovana, misy ao, ary nanana entana ilaina ny manao asa voafantina.
Fanaraha-maso ny Staff Resources-mikendry olona satria, famoronana, ary fanosehana ny asa, manavaka ny tsara indrindra ho an'ny olona ny asa.
Training fahaizana Knowledge fahaizana
Senior School Degree (na GED na High School Equivalence Certificates)
Maro School Courses
Connect ny Level (na 2 taona fanampiny sehatra)
Career fahaiza-mitarika fahaizana
Zava-bita / Energy – 81.77%
tapa-kevitra – 85.64%
tetikasa – 86.08%
Assistance – 92.58%
Matter ny hafa – 84.21%
Cultural Orientation – 85.68%
Fahafehezan-tena – 89.62%
Pressure tokonam-baravarana – 89.47%
mendri-pitokisana – 91.40%
Fanentanana ny Aspect – 95.16%
manao ny marina – 91.58%
fahaleovan-tena – 88.37%
zava-baovao – 89.93%
mieritreritra – 88.24%
Pingback: 10 Issues I Hate About Internet Marketers - TG ...(Dandanah, Hillsburg, Mazaj, BoomBoom)